သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. လူများကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ပို့ဆောင်ခ
ⓘ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. လူများကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများကိုတစ် နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူခြင်း စသည့်ကိစ္စတို့ကို သယ်ယူပို့ဆော ..
ဖူနမ်ရွန် သည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်တွင်ရှိသော တနင်္သာရီတောင်တန်းများကို ဖြတ်၍ဖေါက်ထားသော အမြင့်ပေ ၃၅၀-မီတာ၌ရှိသော နယ်ခြားဖြတ်လမ်းကြောင်း၏ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းဒေသအမည် ဖြစ်သည်။ နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်၏ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကို ဆိုလိုသည်။)
ဟူပေး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းရှိ ကုန်းတွင်းပိတ်ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်နယ်၏အမည်မှာ ​တုံထျင်ရေကန်၏မြောက်ဘက်ရှိ ၎င်း၏အနေအထားကို ရည်ညွှန်းပြီး "မြောက်ဘက်အိုင်" ကို ဆိုလိုသည်။ ပြည်နယ်၏မြို့တော် ဝူဟန်မြို့ သည် အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာနှင့် တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်း၏ နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စီးပွားရေးအချက်အချာဖြစ်သည်။
နည်းပညာ ဆိုသည်မှာ သိပ္ပံ နှင့် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာတို့ကို လူသား နှင့် လူသားတို့ အကျိုးအတွက် အသုံးချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း နှစ်သန်းကျော်က လူတို့၏ ဘိုးဘေးများသည် ကျောက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကိရိယာများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်မှာ နည်းပညာ၏ အစောဆုံး ဥပမာ တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ အခြားသော အစောပိုင်း ဥပမာများမှာ မီးအသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အဝတ်အထည်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး တိုးတက်လာခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းပညာများနှင့် အခြားနည်းပညာများမှာ လူတို့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်စပ်ယှက်နွယ်နေကြပုံကို များစွာ အထောက်အကူ ပြုပေသည်။ နည်းပညာ တိုးတက်မှုအများစုမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ...
အရှင်စန္ဒိမာကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သနပ်ပင်မြို့နယ် အနောက်တံခွန်တိုင်ကျေးရွာနေ ခမည်းတော် ဦးသိန်းအောင်၊ မယ်တော် ဒေါ်ခင်မြတို့မှ ကောဇာသက္ကရာဇ် ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်ကျော် ရက် နံနက် နာရီအချိန်တွင် မီးရှူးသန့်စင်ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ မွေးချင်း ယောက်ရှိသည့်အနက် တတိယမြောက်သားရတနာ ဖြစ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်မှစ၍ လောကီအတန်းပညာများကို သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ အသက် နှစ်အရွယ်တွင် မိဘနှစ်ပါး၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟဖြင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ကျိုက္ကလဲ့ရွှေကျင်ကျောင်းကြီးတွင် ဘဒ္ဒန္တဇဝနကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ရဟန်းဘောင်သို့ တက်ခဲ့သည်။ သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တပည့် ဆရာတော်ဦးသီရိဓမ္မထံတွင် ရက် တရားစခန်းအားထုတ်ပြီး ၎င်းနှင့်အတူ မှော်ဘီသဲအင်းဂူဌာနချ ...
ဈေးဆိုသည်မှာ စားသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားရာဌာန ဖြစ်သည်။ ရှေးအခါက ဈေးကို နေရာ အတည်တကျ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိချေ။ ထိုအခါက လမ်းပန်း အဆက်အသွယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ မလွယ်ကူသေးသည့် အလျောက်၊ တည်ခင်းရောင်းချသော ဈေးဟူ၍လည်း မရှိခဲ့ချေ။ ကုန်ရောင်းလိုသူတစ်ဦးအဖို့ မိမိ၏ကုန်စည်များကို တစ် နေရာတည်းတွင်ထား၍ ရောင်းချသောအခါ၊ မိမိအတွက်လည်း သက်သာ၊ ကုန်ဝယ်လိုသူအဖို့လည်း လိုက်လံရှာဖွေ၍ မနေရဘဲ၊ အလွယ်တကူ လာရောက်ဝယ် ယူနိုင်သည်ကိုတွေ့ရ၏။ ဤ နည်းနှင်နှင်ပင် အခြားကုန်သည်များကလည်း ထိုသူ၏ အနီး တွင် တည်ခင်းရောင်းချ၏။ ဤသို့အားဖြင့် ရောင်းသူဝယ်သူ များပြားလာပြီးလျှင် ထိုနေရာသည် ဈေးဖြစ်လာတော့၏။ ဤကဲ့သို့ဖြ ...
အလယ်ပိုင်း ကာလီမန်တန်, အင်ဒိုနီးရှား၏ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ။ ၎င်းသည်အင်ဒိုနီးရှား ဘော်နီယိုကျွန်း၏ ကာလီမန်တန်အမည်ရသည့် ပြည်နယ်ငါးခုတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ ပါလင်ကာရာယာ ဖြစ်ပြီး ၂ခုနှစ်၁၀ တ ွငလူဦး မှာ ၂.၂ သန်းကျော်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၂.၄၉ သန်းအ မြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် ၂၆၄၉,၈ဦးရေ၀၃ ဖြပါစ်သည်။ လူဦးရေတိုးနှုန်းမှာ ၁၉၉၀ မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်တစ်နှစ်လျှင် ၃.၀% နီးပါးရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆယ်စုနှစ်မှ ၂၀၁၀ အတွင်းနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၁.၈% အထိသိသိသာသာနှေးကွေးခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ ဆယ်စုနှစ်တွင်ထပ်မံမြ ...
သာသနာ့ရံသီမြန်မာဘုရားကျောင်း သည် စင်္ကပူနိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော မြန်မာ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးသော ထေရဝါဒဆိုင်ရာနေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ကျောင်းတော်ကို ၁၈၇၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းတော်ကို မူလနေရာဖြစ်သည့် ကင်တလမ်း ရှိ နေရာမှ Novena ရှိ Tai Gin Road off Ah Hood လမ်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကျောင်းတော်တွင် အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ဖြင့် ထွင်းထုထားသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ ရှိသည်။ ၎င်းရုပ်ပွားတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများသည် ရုပ်ပွားတော်သို့ လာရောက်ရာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလု ...
မက္ကဆီကိုမြို့တော်သည် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ မြို့ တော်ဖြစ်၍ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ ဗဟိုတောင်ဘက်ယွန်းယွန်းအရပ် ၌ မက္ကဆီကိုတောင်ကြားရှိ ကုန်းပြင်မြင့်၏အလယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုကုန်းပြင်မြင့်သည် ပင်လယ်ပြင်မှပေ၇၄ဝဝ မြင့် သည်။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးသင်္ဘောဆိပ်ကမ်း ဖြစ် သော ဗေရကရုမြို့မှ အနောက်တောင်ဘက်တွင် မိုင် ၂ဝဝ ခန့် ကွာဝေးသည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်တွင်ရှိသော မြို့တော်များ အနက် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကို စပိန် ဘာသာဖြင့် မဟီးကိုးဟူ၍ခေါ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းအရ လူဦးရေ ၈,၈၅၁,၀၈၀ ယောက် ရှိသည်။ သဘာဝအားဖြင့် လှပသောရှုခင်းများ အလယ်တွင် တည်ရှိသဖြင့် စိတ်ကြည်နူးဖွယ်အတိဖြစ်၏။ ဆီး ...
ဗြိတိသျှရာဇ် ;ရာ ဇ် စာသားမှဆင်းသက်လာပြီး, "စည်းမျဉ်း" Sanskrit နှင့် Hindustani ကစိုးမိုးရေးခဲ့ ဗြိတိန်သရဖူ ဟာအပေါ် အိန္ဒိယ 1858 ကနေ 1947 မှ အဆိုပါစည်းမျဉ်းကို, အိန္ဒိယသရဖူစိုးမိုးရေးဟုခေါ်သည်။ အိန္ဒိယကိုတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သည်။ ဗြိတိန်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိဒေသလေ့ခေတ်တစ်ခေတ်အသုံးပြုမှုအတွက်အိန္ဒိယကိုခေါ်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်ဒေသများပါဝင်သည်ခဲ့သည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း စုပေါင်းဟုခေါ်ကြသည်သော ဗြိတိသျှအိန္ဒိယ အပေါင်းဌာနေသောမင်းတို့ကအုပ်ချုပ်သူများ, ဒါပေမယ့်ဗြိတိန် tutelage သို့မဟုတ်အောက်မှာ paramountcy, အကိုခေါ် မင်းသားပြည်နယ်များ ။ တစ်ခုလုံးကိုတရားဝင် အင်ပါယာ ဟုတရားဝင်မဟုတ်ဘဲ အိန္ဒ ...
အမြောက်ဆံများ ပစ်ထုတ်ရန်မှ တစ်ပါး ယမ်း၊ ယမ်းဘီလူး စသော ပေါက်ကွဲစရာ ပစ္စည်းများကို ရှေးအခါက အသုံးပြုခဲ့ပုံ တစ်မျိုးမှာ ရန်သူ၏ ခံတပ်များကို ဖြိုဖျက်ပစ်ရာ၌ ပထမ မြေအောက်မှ ခံတပ်အထိ မြောင်းတူးဖောက်၍ သွားရသည်။ ရန်သူ၏ ခံတပ်အောက် တည့်တည့်ရောက်သောအခါ ယမ်းကို စုပုံထားခဲ့ပြီးလျှင် အဝေးမှနေ၍ စနက်တံဖြင့် ဖောက်ခွဲပစ်လေသည်။ မြေအောက်၌ တူး၍ ဤသို့ တစ်နေရာရာတွင် ချထားသော ပေါက်ကွဲနိုင်သည့် ပစ္စည်းကို မိုင်းဗုံးဟု ခေါ်လေသည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းက လူတို့သည် မြေကတုတ်များနှင့် ခံတပ်များ ကို အခိုင်အမာ ပြုလုပ်ပြီးလျှင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသဖြင့် ရှေးခေတ်က အသုံးပြုခဲ့ကြ သော မိုင်းဗုံးမျိုးကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့အသုံးပ ...
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၏သမိုင်းအခြေခံအားဖြင့်များ၏သမိုင်းလွှမ်းခြုံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ၏ဝေးလံခေါင်ဖျားအစိတ်အပိုင်းအတွက်တည်ရှိသည်ဖြစ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက် ။ ၎င်းသည် ချင်းပြည်နယ် မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြောင်းရွှေ့လာသော ချင်းလူမျိုးများ၏ စုပေါင်းသမိုင်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့၏အနောက်ဘက်သို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းပုံစံများသည် ပါးစပ်သမိုင်း နှင့် ရှေးဟောင်းသုတေသန ကောက်ယူမှုများအပေါ်အခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့်တိကျစွာဘာမျှမပြောနိုင်ပါ။ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်သမိုင်းသည် ၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းခန့်တွင် ဗြိတိသျှဘုရင်စနစ်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့သော ဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စတင်ခဲ့သည်။ ချင်းပြည်နယ် နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ မှလူအမျ ...
ဟတ်တွန်ဘူတာ သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ လမ်းမကြီးပေါ်ရှီ ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရိုဇီလာ နှင့် ကာလကတ္တားဘူတာအကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၂၆၂.၅ မီတာ အမြင့်၊ ကိုလံဘိုခံတပ်ဘူတာမှ ၁၇၃.၀၆ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ဟတ်တွန်ဘူတာကို အဓိကလမ်းမကြီးကို Nawalapitiya မှ ဟတ်တွန်အထိ တိုးချဲ့ခဲ့သည့်အချိန် ၁၈၈၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဤဘူတာသည် အဓိကလမ်းမကြီး ၁၈၈၅ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက် Nanu-Oya ဘူတာအထိ မတိုးချဲ့ခင်ကာလမတိုင်မီအထိ ခရီးဆုံးဘူတာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤဘူတာတွင် ရထားစစ်ဆေးရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးနေရာ၊ လက်မှတ်ရုံး၊ ခရီးသည်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအခန်း၊ နားနေခန်း၊ စာအုပ်ရောင်းခ ...